မြတ်သာသနာ ဓမ္မစာမျက်နှာ: မြန်မာအတာသင်္ကြန်နှင့်အထူးသိမှတ်ဖွယ်...
မိမိတို့ အထူးလေးစားရပါသော ဒေါက်တာမသစ္စာ(သစ္စာအလင်း) ဧည့်ပါမောက္ခ၊ မဟာစရက္ခန် တက္ကသိုလ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဧ။် http://drmathitsar.wordpress.com/ Web page မှ အထူးသိမှတ်ဖွယ်၊ လိုက်နာဖွယ် အစိမ်းရောင်ခါးပတ်၊ "MOTTAINAI" နဲ့ မြင့်မြတ်သောခံယူချက် ပို့ စ်လေးအား မြန်မာအတာသင်္ကြန်နှင့်အချိန်ကိုက် ထပ်တူခံစားမျှဝေပေးပါသည်။
မေမေချစ်သော သားသားနဲ့ မီးမီးရေ…
အခုအချိန် မှာ ဆိုရင် သား တို့ သမီးတို့ ရှိတဲ့ မြန်မာ ပြည်ကြီး ဟာ တူးပို့ တူးပို့ သံ တွေ နဲ့ ရွှင်မြူး တက်ကြွ နေကြ လိမ့်မယ်ဆိုတာ မှန်းဆရပါတယ်..။ နှစ်သစ်ကူး တဲ့ တန်ခူးလ ကို ရောက်ခဲ့ ပြန်ပါရော လား။ မနှစ်က တော့ ကလေးတို့ နဲ့ အတူ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ကျောင်းမှာ တရားစခန်း ဝင်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်..။
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ ကျောင်းမှာ ဧပြီလ စခန်းဟာ ကလေးများအတွက် သီးသန့် သတ်မှတ်ထားခဲ့တာမို့ မေမေ ဟာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး၊ ပန်းကန်ဆေး တဲ့ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် ပဲဆောင်ယူလိုက်ပါတယ်..။
မေမေ မနှစ်က မြန်မာပြည် ကို ပြန်ရောက်တယ် ဆိုရင် ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတွေကို ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားရဲ့ ဝေယျာဝစ္စ ကလေးတွေ(အပေး နဲ့ပျော်သူများအဖွဲ့ ) ကို ပို့ချခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..။
နောက် မြောက်ဥက္ကလာပ က သီရိဇေယျုံ ဘုန်းကြီးကျောင်း က အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း က ကလေးတွေကို ကောပေါ့လေ..။
မေမေ တို့ နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေ ကြီး ပူနွေးလာမှုတွေ အကြောင်း..။ဘယ်လို တာဝန်ယူကြမလဲ ၊ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း သင့်ကြ လဲဆိုတာ ဆွေးနွေး ပြောပြခွင့်ရ တာကိုမမေ့ဘူး။ တကယ် လည်းသူတို့ ရဲ့ အပြုအမူတွေ ပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ ပြန်ကြားရ ပါတယ်။
အဲဒီ ပြောပြတဲ့အချက်တွေ ထဲက တစ်ချက်ကို ပဲ အခုပြောပြချင်ပါတယ်..။Green Belt Movement ဆိုတာကိုတော့တစ်ခါ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်..။အဲဒါနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ “MOTTAINAI” ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါ..။
ဂျပန်လူမျိုး တွေရဲ့ ရှေးဟောင်း အယူအဆ အရ ဒီစာလုံးလေးဟာ အဓိပ္ပါယ်များစွာရှိပါတယ်..။ ကျေးဇူးတရား နှင့် မသိတတ်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးရတာတွေအပေါ်မှာ ရှက်စနိုးဖြစ်ရမှု ရောပြွမ်းနေတဲ့ သဘောလေးတွေလည်းပါပါတယ်..။
တကယ့်စကား လုံးလေးတွေကတော့ mottai+nai. Mottai (勿体) ၂ခုပေါင်းထားတာပါ။ Mottai (勿体)ဆိုတာကတော့ the intrinsic dignity or sacredness ofamaterial entity လို့ဆိုပါတယ်။ သဘာဝတရား ကပေးအပ် လာတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ မြင့်မြတ်မှုတွေကို လို့ ဆိုလိုပါတယ်..။ nai (無い) indicates an absence or lack နိုင်းဆိုတာကတော့ မရှိခြင်း လိုအပ်နေခြင်း ကိုဖေါ်ပြပါတယ်..။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေကတော့ မြင့်မြတ်တဲ့ တန်ဘိုးထားအပ်တဲ့ ဘာသာတရား ရဲ့ သင်ကြားဆုံးမမှု ဓမ္မ တွေကိုတဲ့ တလွဲတချော် အသုံးချ မိလိုက် လို့ ရရှိတဲ့နောင်တတစ်ဖန်ပူပန်မှု ကိုတင်စားတ့နေရာမှာသုံး စွဲလေ့ရှိတဲ့ ဝေါဟာရပါ..။
အဲလို အင်မတန် မှ နက်နဲဆန်းကြယ် လှပတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ ရဲ့ စကားလုံးလေးကို ခေတ်မီဆန်းသစ်စွာ သုံး စွဲ ပြလိုက်တဲ့သူကတော့ ကင်ညာ နိုင်ငံမှ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါက်တာ ဝန်ဂါရီ မာသိုင်းပါ။ သစ်ပင် သန်းပေါင် ၃၀၀ကျော် စိုက်ပျိုး ခဲ့တဲ့ Green Belt Movement Leader , No.5of Eco Hero ဖြစ်လေတော့သူက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်းသိမ်းရေး သဘောတရား မှာ သုံးစွဲလိုက်တာမေမေ ကတော့ အတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်..။
ကင်ညာနိုင်ငံ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး လည်းဖြစ်ပြီး သူရဲ့ အစိမ်းရောင် ခါးပတ် စီမံကိန်း ကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။ သူက mottainai ဆိုတဲ့ ဂျပန်စကားလုံးကို Reduce, Reuse, Recycle,” proverbial phrase “Waste not, want not” ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး နဲ့ ယေဘူယျ သဘောအားဖြင့်တူတယ်လို့ သူကဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်..။
ဒေါက်တာ ဝန်ဂါရီက ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ကျိုတို ပရိုတိုကော Kyoto Protocol လုပ်တော့ ဂျပန်ကို အ လည် ရောက်ခဲ့ပါတယ်..။အဲဒီအချိန်မှာ သူက ဂျပန်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ Mainichi Shimbun သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး ကနေ ဒီစကားလုံးလေးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်..။ စကားလုံး ရဲ့ ကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်းမှု နဲ့ အတူ ဆင် တူ ဝေါဟာ ရတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုကော သူမရဲ့ မိခင် ကင်ညာနိုင်ငံသုံး Swahili ဘာသာ စကား နဲ့ ဖလှယ် ပြီး သုံးနှုန်းပြခဲ့ တဲ့ သူ့မိန့်ခွန်း ဟာ အားလုံးရဲ့ အထင်ကြီးလေးစားမှု ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
လောဘမကြီးဘို့ ချိုးခြံ ချွေတာဘို့ နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကပေးအပ်ထားတဲ့ လက်ဆောင် မွန်တွေ အပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ဘို့ လူတိုင်း၊တစ်ဦးချင်းစီမှာ တာဝန်ရှိတာကိုလည်း အသေအချာထောက်ပြ ပြောဆိုစည်းရုံး နိုင်ခဲ့ပါ တယ်..။ ဒေါက်တာ ဝန်ဂါရီ က ဒီစကားလုံးလေးကို စတွေ့ ကတည်းကစပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေပေးတဲ့ နိုင်ငံတကာကိုယ်စားပြု အထိန်းအမှတ် အဖြစ် တိုးတက် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ ကျိုတို ပရိုတိုကောကနေ လည်း အခုလူတိုင်းသိကြတဲ့ Reduce, Reuse, Recycle ဆိုတဲ့ တပ်လှန့်သံစကား လုံး ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရတာပါ..။Reduce —- လျှော့ချပါ..စွမ်းအင်၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ်၊သယံဇာတ သုံးစွဲမှုတွေ လျှော့ချလိုက်ပါတဲ့။
Reuse——ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခါသုံး မလွှတ်ပစ်ပဲ။ ပြန်လည်ပြီး နောက် တစ်ကြိမ်အသုံး ပြုပါ..။
Recycle—–အလေအလွင့်မဖြစ်စေပဲ နောက် ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခု ထုတ်လုပ်မှု မှာ ပြန်လည်ထည့်သွင်းအသုံး ပြုပေးပါတဲ့။ 3R Initiatives လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်..။
၂၀၀၅ ဂျပန် ကျိုတို ပရိုတိုကော Kyoto Protocol က နေအပြန်မှာ သူမဟာ UN Commission on the Status of Women အခမ်းအနား မှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီး “Mottainai.” ဆိုတဲ့ စကားလုံး နဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ လေးနက် တဲ့အမြင် ကို ထပ်ဆင့် သီကျူး ခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်..။ နောက် ပိုင်းတွေမှာ သူ မိန့်ခွန်းပြောရတဲ့ အခမ်းအနားတွေတိုင်းမှာ “Mottainai.” ဟာ မပါ မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး။
Japanese singer/songwriter Masashi Sada ကလည်း သည်အတွေးအခေါ်ကို ထပ်ဆင့်တိုး ပြီး “MOTTAINAI” သီချင်းကို ဖန်တီးရေး ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်..။ဒီသီချင်းဟာ ဂျပန်လူမျိုး တို့အတွကိ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ Everybody’s song (みんなのうた, minna-no-uta?),လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန် ကလေးများ အတွက် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာ NHK TVကနေပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီ နဲ့ မေလ တွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပြီး ကလေးတွေ ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခံယူချက်ကို စွဲမြဲခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်..။
ဂျပန် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ တန်ချိန်၂၃သန်း ရှိတဲ့ အစားအစာတွေ အလဟဿ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..။ ငွေအားဖြင့်ဆို အမေရိကံဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလီယံ နဲ့ တန်ဘိုးချင်း တူပါသတဲ့။ဂျပန်က ချမ်းသလေတော့ လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစားအစာ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို အဲဒီအသိနဲ့ ပညာပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါ့အပြင် ရေပိုက် ကိုမလိုပဲ တအားဖွင့်သုံးတာတွေ။ မီးတွေအများကြီးဖွင့်ထားတာတွေ၊ ကွန်ပျူတာ မပိတ်ပဲ လျှောက်သွားနေတာတွေပါ အကျုံး ဝင်တယ်နော်..။
သားသားတို့ မီးမီး တို့ကိုမေမေပြော လိုတာကတော့ မကြာချင်မှာကျရောက်တော့ မဲ့ မေမေတို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးလှပါတယ် ဆိုတဲ့သင်္ကြန်ပွဲ မှာ အကျိုးမဲ့လှစွာ ရေကြည်ရေသန့် တွေကို မဖြုန်းတီးစေချင် လို့ ဒီစာလေးကိုရေးလိုက်ပါတယ်..။
အင်းယားကန်လောက် ပက်လိုက်ပါ..ကန်တော်ကြီးလောက်ပက်လိုက်ပါ..မန္တလေးကျုံးရေ ပက်လိုက်ပါဆိုတာ အင်မတန်မှ အဘိုးတန် တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ် သယံဇာတတွေကို ဖြုန်းတီး ပစ်လိုက်သလို ဆိုတဲ့အတွေး လေ တွေးပေးပါလို့။သောက်သုံးရေ တစ်လီတာရဘို့ ကမ္ဘာ မှ လူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေကြလဲ..ခံစားပေးပါ..။
တာလမ်းမပေါ်မှ ဆုံးရှုံး လေလွင့်သွားမဲ့ရေ လေးတွေ သောက်သုံး ခံ ကြရပါစေ..။အကျိုးပြုခွင့်ရပါစေ..။
ဒီအချိန် မတော်တဆ မီးလာင်ခဲ့ရင်ကော ။
ရေငတ် နေတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေ နွေအပူခံနိုင်ဘို့ ကော..။
ကျေးငှက် တိရိစ္ဆာန် လေးတွေအတွက်ကော…. ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးကြပါလို့ မေမေ တောင်းဆိုချင်တာပါ..။
မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အပျော် အပါးအတွက် ရေတွေပက်မဲ့အစား သပြေခက်လေးနဲ့ ရိုးရာလည်း မပျက်အောင်… မေတ္တာရေစင်လေးသွန်းလောင်းစေလိုလှပါတယ်..။
ပိုင်းလော့ကျောင်းမှာတော့ ဒီဟောပြောပွဲအပြီးမှာ တရားစခန်း ပွဲတွေ မှာ အလိပ်လိုက်သုံးရတဲ့ တခါသုံး တစ်သျှူးတွေအစား ပြန်သုံး နိုင်တဲ့ လက်သုတ်ပဝါတွေကု ယောဂီတွေကို ဝေပေးထားတာ သိလိုက်ရတော့ ..ဝါးပင်လေးတွေ တချို့ရဲ့အသက် ကို ကယ်တင် လိုက်နိုင်သလိုခံစားပီတိဖြစ် ရပါတယ်..
အဲလိုပဲပေါ့နော်…တကယ်လို့ ဒီစာစုလေးကိုဖတ်ပြီး မြန်မာ Mottainai ခံယူချက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့လို့ ဒီသင်္ကြန်ပွဲမှာ ရေဂါလံပေါင်းများစွာ ချွေတာပြီး တည်တံ့ ကျန်ရှိနိုင်ပါတယ် ဆိုရင် ထိုရေစင်များကို မြတ်ဘုရားထံ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း လျက် ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြာင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်းဆုပြုလိုက် ပါရစေ.။
ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ ကျန်းမာပါစေ..။
အထက်ပါသီလပေးအား Download ရန် Click here …..
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ကြီး၏တရားတော်များအား MP3 Player နှင့်အတူလွယ်ကူစွာနာယူနိုင်ပါရန်လှူဒါန်းပူဇော်အပ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ၂၀၀၄-ဇူလိုင် တရားစခန်းပါတ်တွင်ဟောကြားတော်မူသော-
အထက်ပါတရားတော် Download ရန် Click here …..
၁၆)လိုတရ နည်း၊ ယခုဘ၀ချမ်းသာနည်း
၁၇)သံသရာလည်ပုံ၊ ပြတ်ပုံနှင့် မဂ်အကြောင်း
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး .......... ဟောကြားတော်မူသော-
Dhamma Download မှနာယူနိုင်သောတရားတော်များ
Siri Mangala Society မှနာယူနိုင်သောတရားတော်များ
Pilot Sayadawgyi Web Page
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဓမ္မစာအုပ်များ Download ရန်..
သံဝေဂ နှင့် အလုပ်ပေးတရားတော်
ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး 10-GREAT BENEFACTORS
FOR NON-ARISING OF REBIRTH AND PERSPECTIVE OF NIBBANA
“နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင်”့ တရားတော် (ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး)
စိတ်ဝင်စားဖွယ်သံဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်အကြောင်း (ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး)
ကိသာဂေါတမီ-မိဘကျေးဇူး တရားတော် အပိုင်း-၁ (မြစင်္ကြာဆရာတော်ကြီး)
ကိသာဂေါတမီ-မိဘကျေးဇူး တရားတော် အပိုင်း-၂ (မြစင်္ကြာဆရာတော်ကြီး)
ကံဖြူ၊ ကံမဲ တရားတော် (အောင်မင်္ဂလာဆရာတော်ကြီး)
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ ဓမ္မစင်္ကြာ၊ မဟာသမယသုတ်၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မေတ္တာပို့ 
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ ဓမ္မစင်္ကြာ၊ မဟာသမယသုတ်၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်
Mo Gok Vipassana (မိုးကုတ်ဝိပဿနာ)
MoGok Meditation Group USA
Ma Ha Si Vipassana (မဟာစည်ဝိပဿနာ)
Le Di Vippassana (လယ်တီဝိပဿနာ)
Sun Lun Vippassana (စွန်းလွန်းဝိပဿနာ)
The Inn Gu Vippassana (သဲအင်းဂူဝိပဿနာ)
Ka Thit Wine Vippassana (ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ)
Kan Ni Vippassana (ကန္နီဝိပဿနာ)
Pa Auk Vippassana (ဖားအောက်ဝိပဿနာ)
Pa Ko Ku Vippassana (ပခုက္ကူဝိပဿနာ)
ဓမ္မကထိကများ၊ သံဃာတော်များ စာမျက်နှာ
သန့် -တည်-ပွား ဆရာဦးမြင့်လွင်
Dhamma by English
THERAVADA BUDDHIST SOCITY OF AMERICA
SITAGU BUDDHIST VIHARA (USA)
THE PEACE OF NOBLE TRUTH
Singapore Buddhist Society
ဆရာတော် ဦးတိလောကသီရိ( Topayoh ကျောင်းကြီး)
Dhamma Garden Buddhist Society (ဓမ္မဥယျာဉ်)
ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဓမ္မဿာမိ
ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးသုပိယ (ဗုဒ္ဓဂယာသုခါရာမကျောင်း)
ဆရာတော် ဦးစိတ္တ္ကရ(မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း Eunos)
VMC ဆရာတော် ဦးပညာနန္ဒ
Dhamma Bloggers ဓမ္မဘလော့ဂါများ
ဘုန်းဘုန်း ဦးဝိစိတ္တ (Korea)
Burmese Theravada Buddhism Association, Norway
Metta Ramsi Vihara, Belgium
Panna Ramsi Vihara, Netherlands
Buddha Sasana Ramsi Vihara, Germany
Buddha Damma Ramsi Vihara, Finland
သုတေသနသရုပ်ပြ အဘိဓာန် (၂၀၀၉)
ဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်း USA
Dhammaransi မေတ္တာပို့ တေး
Shwe Dream နောက်ဆုံးထွက်မြန်မာသီချင်းဗွီစီဒီ
အရိုင်းပန်း(AYinePan) MM Music
Myanmar Music Online
Burmese Classic မြန်မာဗွီဒီယို၊ရုပ်ရှင်
Shwe Dream မြန်မာဗွီဒီယို၊ရုပ်ရှင်
English-Myanmar Dictionary & Education
Myanmar Forums & Best Web Page Links
Burmese Classic USA
Yet Another မြန်မာစကားဝိုင်း
ပဒုမ္မာဖိုရမ် Padonma Forums
Native Myanmar ကွန်ပြူတာဖိုရမ်
Royal Myanmar Magazine
To Search Myanmar Blogger's
Myanmar Government Ministries & Other Links
Ministries in Myanmar
Myanmar Newspaper Links
Medical Links (ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ)
ကွန်ုပြူတာ နှင့် မျက်စိရောဂါ
Hepatitis C စီပိုးနောက်ဆက်တွဲ
မျိုးဗီဇစမ်းခြင်း DNA Testing
သွေးတိုး(သို့ မဟုတ်)အသံတိတ်လူသတ်သမား နှင့် ထိမ်းချုပ်နည်း(၁၀)နည်း
ကျန်းမာသန်စွမ်းရန် စားသောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရောင်(၅)ရောင်
စကာင်္ပူ မှ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲ
ကမာရွတ်နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့သို့အခမဲ့မေးမြန်း...
အမှတ်တရ ဂရိနိုင်ငံ နှင့် ဂရိကျွန်းလေးများ
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော သံဝေဂ ...
တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥတ္တမသာရ အားဖူ...
ဖူးမြော်ကြစို့ လေးဆူဓါတ်ပုံ မြတ်ရွှေတိဂုံ
သုဓမ္မသိင်္ဂီမလယ်လယ်အောင်(ခ)မလေး သို့နှစ်သစ်အမှတ...
Marc Lawrence ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ..
“အပါယ်တံခါးပိတ်” နှင့် “နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင်”့ တရားတော...
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ ၏ “ဂုဏပူဇာ” မင်္ဂလာအခမ်းအန...
Happy Myanmar New Year !!!
Let's us join together pray for Japan Victims !!
မြတ်သာသနာ ဘလော့ဂ် ရည်ရွယ်ရာ..
“မိဘမေတ္တာ နှင့် ချစ်သူမေတ္တာ”
ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်နှင့် ရှုလို့ရပါ့မလား
မာဃဒေ၀ - ၁၈၅
အာရှတိုက်၌ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားပုံ
မြတ်သာသနာ ဓမ္မစာမျက်နှာငယ် မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာစေသော သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာများအားဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါ၏။
သစ္စာတရား.com (ကိုဝင်းမြင့်၊ မမေဟန်)
အမြင် အသစ်...ဘဝ သစ် - မနေ့က ပင်ပန်းခဲ့လို့ တစ်ဝ အိပ်ပျော်ခဲ့ပြီး အိပ်ယာကနိုးလာချိန်မှာ တော့ကြည်လင် လန်းဆန်း လျက် ပဋ္ဌာန်းပူဇော်…ဘုရားဝေယျာ ဝစ္စ ကုသိုလ် ယူဖြစ်ပါတယ်..။ တကယ်တော့လည်း...
The Blog is my DIARY...
ကမာရွတ် နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့က ကြိုဆိုပါတယ်
သင် သိရှိလိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မြန်မာလို ရိုက်ပြီး အီးမေးကတဆင့် မေးမြန်ရန် ဤနေရာကို ကလစ်ပါ…း
Copyright 2011 မြတ်သာသနာဘလော့ဂ် All rights reserved.. Watermark theme. Powered by Blogger.